Ianaro ireto teknika fanaovana sary an-tsary momba ny sary voalohany ireto. Famoronana an-tserasera
Sary avy amin'i salvadorfornell dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Mba hampivelarana azy ireo dia mila taratasy, pensilihazo ary soloina fotsiny ianao. Andao ho any!
1 Teknika momba ny sirkulisma
2 Teknika lakroa
3 Teknon'ny alokaloka
4 Teknika fanodinana
5 Teknika Sgraffito
6 Teknika fanakorontanana
Teknika momba ny sirkulisma
Miorina amin'ity teknika fanaovana sary ity manaova sary faribolana kely mifanindry, amin'ny fomba iray izay namoronana vokatra tsy ara-dalàna. Afaka manao faribolana lehibe kokoa na kely kokoa isika, miankina amin'ny ambaratongan'ny haizina izay tiantsika homena ny sary.
Mety amin'ny fanaovana sary ny hoditry ny olona izy io, satria azontsika taratra ny mason-kodiny.
Ny Hatching Cross dia mifototra amin'ny famolavolana ny lattice lakroa, manao tsipika mifanila sy diagonaly. Noho izany, hamorona endrika amin'ny sary izahay. Ny fanaovana ireo tsipika misaraka bebe kokoa na latsaka dia hahazo haizina hafa.
Ny teknikan'ny alokaloka dia miorina, araky ny anarany, amin'ny mamorona aloka amin'ny alàlan'ny famindrana ny pensilihazo amin'ny zigzag. Mba hanaovana izany, dia hampitombointsika bebe kokoa ny tsindry ny pensilihazo, ary koa ny zoro, miankina amin'ny haizina izay tiantsika homena.
Ity teknika ity dia misy manaova tsipika miaraka hanamarihana ny endrik'ilay drafitry ny zavatra iray. Izy ireo dia ampiasaina hamenoana toerana malalaka, mamorona aloka amin'ireo tarehimarika.
Miorina amin'ny teknika fanatodizana, manao sosona bebe kokoa isika amin'ny fomba mitovy, mifanindry. Ny drafitry ny zavatra dia ho voamarika kokoa.
Ity teknika ity dia tena mitovy amin'ny teknikan'ny sirkulism, fa amin'ity tranga ity miaraka bebe kokoa isika, mamorona haizina lehibe kokoa amin'ny endritsika.
Ho fanampin'ireny dia misy teknika marobe hampivelarana ny fahaizanao amin'ny pensilihazo. Raha te hanao fanamby amin'ny fanaovana fialamboly ianao dia manoro hevitra anao aho hamaky ity lahatsoratra teo aloha.
Ary ianao, inona no andrasanao haka ny pensilihazoo ary manomboka manao sary?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ianaro ireo teknika fanaovana sary mahazatra ireo ho an'ny vao manomboka